Fomba fiaina - Magcrible Mahagaga
Manambadia ao amin'ny tanin'ny Maharaja's ao amin'ny Jai Mahal Palace, Jaipur
Febroary 19, 2020
Inoana fa rehefa mifanambady ny olona roa dia lalao natao tany an-danitra izany. Na izany aza, any India, ny fampakaram-bady Indiana matavy be dia nofinofin'ny mpampakatra rehetra. Rehefa mahita fiovana ny kolontsaina, dia toy izany koa ny fampakaram-bady. Ny fampakaram-bady ho an'ny tanjona dia…
Ahoana ny fomba handravahana ny zaridainanao ho an'ny hetsika anatiny
Mikasa ny hampiasa ny zaridainan'ny tranonao ve ianao, na ny toerana malalaka ho an'ny hetsika ho avy? Raha eny, dia mamaky ilay zavatra tokony hovakinao ho amin'izany ianao. Amin'ity bilaogy ity dia hiresaka hevitra mahatalanjona hanova ny habakao izahay…
Fa maninona no ilaina ny fikojakojana ny tankin'ny septika mba hahasalama tsara kokoa?
Miverina any an-tokotany indray, halevina ao ambany, ny tank septic dia zavatra miasa foana. Rehefa matory isika dia miasa izy io, rehefa misakafo hariva isika dia mbola miasa foana ao anaty haizina. Ny fahasalaman'ny rafitra septika…
Plus Size jumpers and Rompers - singa milay indrindra amin'ny andro fahavaratra
Janoary 4, 2020
Ny Rompers dia mety tsy ho endrika mahafinaritra. Mandra-pahatonga anao tsy hametraka azy io dia tsy hahatsapa izany ianao, heveriko fa tsy afaka mahatsapa ny fampiononana ianao raha ny tena izy. Matetika ny rompers dia vita amin'ny landihazo, ary izany dia mora kokoa. Tsotra tokoa fa tsotra…
Inona ny hoditra Nubuck ary amin'ny inona no tsy itovizan'ny hoditra Nubuck amin'ny Suède?
Desambra 20, 2019
Na dia mety ho sarotra aza ny manavaka an'i Nubuck Leather sy Suede, dia tena misy fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa tonta, fa inona marina ny fahasamihafana? Mendrika ny vidiny ve ny vidin'ny hoditra Nubuck avo lenta? Nubuck leather dia endrika iray…
Fa maninona no misafidy palitao ririnina mandritra ny toetrandro ririnina?
Saika eo ny vanim-potoana Ririnina, marina? Te hisafidy ny fitaovana ririnina mety ianao eo afovoan'ny isan'ny akanjo marobe. Na dia be dia be aza ny eny an-tsena dia tokony hampiasa vola amin'ny kojakoja mety ianao hiarovana anao…
Momba ny Gemini Zodiac Sign Gemini no famantarana fanandroana fahatelo an'ny fianakaviana zodiac izay soloin'ny kambana Castor sy Pollux. Ny lafiny miavaka amin'ity famantarana zodiaka ity dia ny fampidirany ny ambaratonga fototra indrindra ho an'ny olona iray, toy ny fampisehoana ny toetrany roa. Io koa…
Hevitra fanomezana fanomezana hoditra 4 mahafinaritra ho azy
Ianao ve mitady vokatra hoditra hanomezana azy? Ity lahatsoratra ity dia afaka manampy anao. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatrao ny momba ny vokatra hoditra efatra tsara indrindra izay mety hanomezana azy. Raha tsy mandany fotoana dia andao hanomboka. Mpijery vita amin'ny hoditra ho an'ny lehilahy…
Fa maninona no safidy lehibe ny fandefasana mofomamy an-tserasera?
Ny mofomamy dia fomba tsara hankalazana ny zava-bita sy ny fotoana rehetra. Ny mofomamy dia safidy mety koa hanampiana silaka fanampiny isaky ny fotoana. Mandritra izany fotoana izany dia mahafinaritra ny mofomamy ho an'ny rehetra ary tsy misy hetsika iray vita raha tsy misy ny lanonana fanapahana mofomamy.…
Fihoarana ara-teknolojia: Fomba elektronika 5 no miantraika amin'ny torimasonao
Septambra 26, 2019
Raha afaka mijery antsika ny olona tamin'ny taonjato lasa, dia nanapa-kevitra izy ireo fa miaina amin'ny tontolo hafahafa sy mampatahotra tokoa isika. Ny lehilahy maoderina dia voahodidin'ny elektronika hatraiza hatraiza, izay tato anatin'ny folo taona lasa dia nivoatra hatramin'ny avo tsy mampino. Ankehitriny, afaka mora foana ianao…
1 2 3 ... 14 Manaraka